Te hanandrana Linux ve ianao? Torolàlana ho an'ireo vao liana sy vaovao. (Faha-2. Fizarana) | Avy amin'ny Linux
Te hanandrana Linux ve ianao? Torolàlana ho an'ireo vao liana sy vaovao. (Faha-2. Fizarana)
Perseus | | fampiharana, soso-kevitra
Tongasoa eto amin'ny tapany faharoa amin'ity torolàlana ity. Amin'ity indray mitoraka ity dia hasehoko anao ny fomba: Mitadiava fomba hafa amin'ny fampisehoana tianay ary inona izany ny ivon-rindrambaiko ny fizarana anay.
Lehilahy, miandry segondra !!! Tsy hampianatra ahy izay tokony hataoko ve ianao mba hananako Linux amin'ny solosainako? Mazava ho azy fa ho hitantsika, fa ity kosa ho avy eo;).
Ny antony lehibe nanaovako azy toy izao dia satria matetika isika dia mahita fampahalalana amin'ny tambajotra momba ny fomba fametrahana sy izay tokony hataontsika aorian'ny fametrahana (post-install). Izaho manokana dia tsy tiako io fomba io satria toa: apetraho aloha ny Linux dia manaova fikarohana (na anontanio), ok? Toy ny hoe manandrana mivarotra anao zavatra tsy fantatrao izy ireo raha mety aminao na tsia. Tsy izany no tanjoko "Ripaho ianao", fivarotana aminao ny hevitra hoe Linux no panacea (tsy miteny aho hoe ny hafa no manao izany 😉), ny tena mahaliana ahy dia ny ahitanao azy ho anao ary tianao ny tianao. Toa azy ireo izany? Andao hanomboka amin'izay: D:
Isika rehetra izay vao tonga tao Linux dia sahirana mampifanaraka ity tontolo ity, amin'ny fomba vaovao hanaovana izay rehetra nataontsika mora sy isan'andro. Raha fintinina, «Mahatsiaro ho any an-trano». Mety malahelo ny antsika isika «Fampiharana taloha mandritra ny androm-piainana» toa an'i Microsoft Word, WLM (Windows Live Messenger), Corel Draw, sns., nino fa amin'ny Linux dia misy ny zava-drehetra "Sarotra, mampijaly ary hafahafa"... Na ny firesahana amin'ny namako aza dia mety ho sarotra be ..., mety hieritreritra ianao.
Miaraka amin'ny fomba fijery toa izany, dia tena mora ny mifikitra amin'ilay hevitra hoe hiverina any amin'ny rafitra fiasantsika teo aloha "Eto" tsy afaka mahita zavatra mety amintsika izahay "fianakaviana". Aza manahy fa voajanahary be ireo rehetra ireo, toy ny hoe nangataka anay izy ireo mba hamela ny fampiononana rehetra ao an-tranonay mba hipetraka anaty lava-bato toy ny tamin'ny fotoan'ny lava-bato.
Raha nolazaiko anao fa tena mora tokoa ny mampifanaraka an'ity vaovao ity «World»hino ahy ve ianao? Tohizo ary ...
1 Solosaina amin'ny fampiharana ankafizinay:
Solosaina amin'ny fampiharana ankafizinay:
Soa ihany ho antsika, Linux dia manana safidy hafa an-taonina amin'ireo rindranasa tianao indrindra. Andao jerena ohatra vitsivitsy:
<° Web browser
<° Mpanjifa ho an'ny tambajotra sosialy (Twtter sy Identi.ca)
<° mpanjifa fandefasana hafatra eo noho eo (LiveMessenger, GTalk, Jabber, Facebook, sns.)
<° Mpilalao feo
<° Mpilalao horonantsary
<° Fivarotana birao
Calligra (Koffice taloha)
Ity lisitra ity dia santionany kely fotsiny amin'ny zavatra nolazaiko taminao, azonay notohizana, fa ny tena marina dia mavesatra loatra ho an'ny rehetra izany: P. Mbola tsy nahavita nampiaiky volana anao ve aho? Ilay programa tadiavinao ve tsy anisan'ireo voalaza etsy ambony? Ok, amin'ity tranga ity dia manasa anao aho hanaraka ity rohy manaraka ity: Solosaina amin'ny lozisialy efa fantatrao momba azy ary tianao hosoloina.
Araka ny lazain'ny mpamorona ny tranonkala: «AlternativeTo dia iraka hanampy anao hahita ny rindrambaiko mety amin'ny solosainao, telefaona finday na takelaka misy anao. Ny tena tanjonay dia ny hanome anao safidy hafa ho an'ilay rindrambaiko efa fantatrao sy tianao hosoloina ». Ny tena tsara indrindra dia tsy ny fomba hafa no ahitanao ireo solon'izay fampiharana Windows zanatany, fa azonao atao koa amin'ny Linux, Mac, iPhone, Android, ankoatry ny hafa. Tena tsara _ _ ^ !!!
Amin'ity tranonkala ity dia afaka mitady fangatahana manokana izahay, na amin'ny sokajy na amin'ny anarany. Ireto misy pikantsary:
Fikarohana isaky ny sokajy.
Karohy amin'ny anaran'ny fampiharana.
Araka ny ho hitanao, dia nitady fomba hafa azo atao Corel draw, ny lisitra atsipiko dia be dia be, avelako ny rohy an'ny fikarohana mba hankasitrahan'izy ireo kokoa izany.
Tena mora be ny mahita solon'izay fandaharanay "androm-piainana", Manasa anao aho hanandrana azy, iza no mahalala, angamba hahita fampiharana izay manao ny asany tsara kokoa noho ny iray efa nataonao tao amin'ny OS teo aloha ianao;).
Ny ankamaroan'ny distro dia manana "Software Center", ahafahantsika mikaroka, mametaka ary manaisotra fampiharana. Izany dia zavatra iray izay isika "Linuxeros" afaka mirehareha isika, satria tsy misy zavatra mitovy amin'ny Windows (farafaharatsiny tsy ho an'ity fotoana ity), manamora ny zavatra ho antsika.
Ivotoerana rindrambaiko Ubuntu:
Ao amin'ny solosainako no ampiasako Ubuntu 11.10 hiasa, ka, izany no ho voalohany hasehoko anao. Ity ambany ity ny sarin'ny Software Center of Ubuntu (CSU):
Avy amin'ity ivon-rindrambaiko ity no ahafahantsika mitady ny rindranay, na amin'ny sokajy:
na afaka mitady amin'ny anarany isika.
Manana faritra iray koa izahay izay mampiseho anay ireo rindranasa Vao haingana ary ny Sarobidy indrindra avy amin'ny mpampiasa.
Farany, eo amin'ny farany ambany amin'ny varavarankely dia afaka mahita ny totalin'ny rindranasa azontsika apetraka isika:
amin'ity indray mitoraka ity dia mampiseho amintsika fa manana isika 36,467 singa misy, misy maro, sa tsy izany?
Fitsapana ny Ivontoerana Software Ubuntu
Satria mora kokoa amiko ny mianatra haingana kokoa amin'ny fomba azo ampiharina noho ny fomba teôria, tiako ny hanandramanao ny CSU, hahatratrarana azy, tsidiho ity rohy manaraka ity: Ubuntu Software Center. Eto ny trondro.
Satria tsy ny zava-drehetra dia Ubuntu;), asehoko anao ny sarin'ny Ivotoerana hafa na Administratera lozisialy misy distros samihafa:
Amin'izany rehetra izany dia antenaiko fa nasehoko anao fa tsy izay rehetra voalaza momba ny Linux dia marina. Navelantsika ireo angano taloha toa ny: "Sarotra ny mampiasa Linux", "Tsy dia misy firaketana firy ho an'ny Linux", "Linux tsy natao hanaovana asa matotra", "Linux dia natao ho an'ny genius, geeks na nerd", sns, sns, sns. Manantena aho fa nahatratra ny tanjon'ny fanaovana anao hahita Linux amin'ny fomba hafa. Raha mbola liana amin'ny fanandramana azy ianao dia mampanantena aho fa amin'ny lahatsoratra manaraka dia hasehoko anao ny fomba fametrahana azy, amin'ny fanararaotana, araka ny lazainay any Mexico tanindrazako: Taona vaovao, rafitra miasa vaovao ...
Mandra-pahatongan'ny fotoana manaraka sy fialantsasatra mahafaly 😉
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Te hanandrana Linux ve ianao? Torolàlana ho an'ireo vao liana sy vaovao. (Faha-2. Fizarana)
Lahatsoratra mahafinaritra, iriko mba nahita zavatra toy izany rehefa niditra teto amin'ity tontolo ity aho. 8)
Ary tratry ny taona
Mamaly an'i ren
Misaotra betsaka namana, mieritreritra aho fa mety nitia zavatra toa an'io XD daholo isika
Miarahaba anao aho noho ny fanoloran-tena, ny fahazavana ary ny kalitaon'ny lahatsoratranao (amin'ny faritra roa); Tsy misalasala aho fa tena ilaina sy manazava izany ho an'ny olona liana te hahafantatra sy hahafantatra ny fampiasana Linux.
Saingy tsy mampino ny asa omenao ny tenanao amin'izany, azoko antoka fa tsy manam-potoana handehananao any amin'ny piss ianao
Fizarana faharoa tsara.
Atoro ho an'ny vao manomboka, ity fizarana faharoa ity dia teboka fanombohana tsara.
Ozcar dia hoy izy:
Tena tsara koa ity lahatsoratra ity, asa tsara ... Toy ny tamin'io iray hafa io, arahabaina.
Valiny tamin'i Ozcar
Ny mahatezitra ahy (antonony satria milamina be aho xD) dia ny fanadinoana ireo mpampiasa Kubuntu, nolazaiko izany satria nahita ny Ubuntu Software Center amin'ny sary aho ary mahatadidy fa i Muon (na dia lehibe aza) dia tsy Be loko tokoa izy io, tsy manana izany karazana doka izany ao amin'ny Ubuntu, ary zavatra iray hafa mahasosotra ahy ny Ubuntu One ¬ ¬ vintana Minus xD
Raha hiverenana bebe kokoa amin'ny lohahevitr'ilay lahatsoratra aho dia mahafantatra olona maro izay matahotra ny hanao ny fitsambikinana mankany Linux noho ireo fampiharana. Izany hoe matahotra izy ireo sao tsy afaka miasa miaraka amin'ny LibreOffice ohatra, matahotra izy ireo sao tsy afaka hihaino ny hira ankafiziny miaraka amin'i Amarok ohatra, matahotra izy ireo sao tsy afaka mampiasa Spotify ohatra (miaraka amin'ny Tsara ny divay ary misy aza ny zanatany mpanjifa - amin'ny fanandramana, mazava ho azy- mbola misy Groovehark T_T) matahotra ihany koa izy ireo ny tsy hahafahany mametraka ny webcam sy ny tabilao tsy misy tariby miaraka amina CD fametrahana, matahotra koa izy ireo fa tsy mandeha ho azy ireo ny mpanonta printy, ary matahotra izy ireo fa tsy misy ny Photoshop ho an'ny Linux ... izany rehetra izany no mahatonga ny mpampiasa vaovao GNU / Linux mety tsy hitsambikina, ary azoko izany, satria Nanana izany tahotra izany koa aho (tokony ho 2 taona lasa izay) saingy nanao risika aho ary nanao ahoana ny hatsarany 😛 hahaha
Ary rehefa namaky ity lahatsoratra ity aho ary nahita fa nanao lisitra fampiharana be dia be ianao ary nanome ny rohy mankany amin'ny AlternativeTo, dia nahita hevitra mamirapiratra aho nanasa ny namako hamaky ity lahatsoratra ity sy ilay voalohany nataonao (ilay manana ny mpitari-dalana) hahitana raha mamaky an'ity na tsia manaova hafaliana, manirery tokoa aho TT hahaha
Miarahaba !! ary misaotra anao 😉
Azo antoka fa ireo lahatsoratra ireo avy amin'ny Perseus Manam-potoana be dia be izy ireo, satria tsy mila manazava firy isika hahahaha, omentsika ny olom-pantatsika ny rohy amin'ireo lahatsoratra ireo ary dia izay.
Ny olana amin'i Muon dia raha ampitahaina amin'ny USC dia mbola tanora dia kely ... ity faharoa ity dia efa an-dàlam-pandrosoana lava kokoa, mazava ho azy fa mbola lavitra ny lalan'i Muon.
Eny, fa ny Canoni $ matetika dia avy any Kwinbuntu toy ny mihinana diky, ka hihena kely kokoa izy ireo
Voalohany indrindra, misaotra betsaka tamin'ny fanehoan-kevitra;). Faly be aho fa ny ezaka ataontsika amin'ny alàlan'ny bilaogy dia misy valiny amin'ny fanandramana manasa ireo mpampiasa OS hafa (Windows indrindra) hanandrana ny Linux, satria ny hevitra dia ny handresy lahatra fa tsy hiezaka ny hametraka.
Ho anay, tianay ny manoro anao anay na dia amin'ireo mpiara-monina aza raha mety XD. Aza mitsahatra mitsidika anay ary ambonin'izany rehetra izany mba haneho hevitra ... Miarahaba 😉
fmateo05 dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, na dia somary mitatra kely aza, manana ny fampiharana ilaina amin'ny fampiasana isan'andro, na koa ...
Amin'ny tranga manokana manokana dia mampiasa Funtoo Linux aho… ary distro tsara ho an'ireo izay manana traikefa (3 volana sasany)
Valio i fmateo05
Misaotra anao tamin'ny fitsidihana sy hevitra 😀
Tongasoa eto amin'ny tranokalanay manetry tena 🙂
Ny zavatra manetry tena azonao notsimbinina, majete, miaraka amin'ity fanehoan-kevitra ity izay ataonao dia mamela ny fanetren-tena
Torolàlana tena tsara fa mbola tsy mahita fanoloana amin'ny Linux amin'ireo programa ireo aho izay indraindray mahatonga ahy hiditra W $ amin'ny partition hafa, raha vantany vao misy mitovy na mitovy aminy ... Bye W $ ... ireo dia:
- Internet Download Manager (IDM); Hilaza amiko izy ireo fa ny KGet sy WGet dia tsy mitahiry afa-tsy 10% amin'ny zavatra ataon'ny hafa.
- MyPony; Hilaza izy ireo fa JDownloader fa ampiasaiko izany ary moka izy, tsy manoro izany aho.
- Outlook; Na Kmail na Evolution dia tsy mifanandrify aminy, ary manana Thunderbird ho an'ny mailaka miasa aho, saingy i Outlokk dia tena feno, miaraka amin'ny findaiko koa io.
Nokia sy Motorola suites; ny Wammu dia tsy mahatratra ny kitrokeliny, indraindray koa dia fantany ny telefaona ary indraindray tsy izy.
Farafaharatsiny LibreOffice dia efa voadinika tokoa ka afaka nanao tsy nisy $ M aho.
Raha mahafantatra zavatra tena mandeha ianao, dia tiako izany.
Zsss dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara arahaba
Mamaly an'i Zsss
Desktop Linuxero tsara indrindra (Jan / 12)
Linux amin'ny synthesizers